काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सार्वजनिक जग्गा मिच्ने जो कोहीलाई कारबाही हुने बताएका छन् । उनले सार्वजनिक जग्गा कहीँकतै अतिक्रमण भए तत्काल त्यसको सूचना संघीय सरकारलाई दिन स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई गराउन पनि अनुरोध गरेका छन् । शनिबार काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा पुनर्निर्माण
काठमाडौं, ३ साउन । नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी) आबद्ध देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका राष्ट्रिय अध्यक्ष सिपी गजुरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारविरुद्ध अर्को सशक्त जनआन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आईसकेको बताएका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पुष्पलाल अध्ययन समाज, जनसमाजवादी
काठमाडौं । सरकारले असार १९, २३ र २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल वाँस्कोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । निर्णयहरुकाे सुची: १. बीउ विजनको किसिम, जातहरूको सूची नेपाल राजपत्रमा
काठमाडौ, २२ असार– सांसदहरुले पेन्सनवाला कर्मचारीलाई दिइँदै आएको चाडपर्व खर्चवापतको एक महिनाको तलब दिने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसकी
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक दिउँसो २ बजे बस्दै
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पार्टीको आन्तरिक र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न आज बस्दैछ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिद्वारा प्रस्तुत नियमावली, राष्ट्रिय जागरण अभियानको पहिलो चरणको
प्रचण्डलाई बाबुरामको जवाफ– मनाङे 'कमाउनिष्ट'हरूको जयहोस् !
काठमाडौँ– समाजवादी पार्टी, नेपालका परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘नेकपा’ का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई मनाङे डनहरूका मतियार भएको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार ट्वीट गर्दै बाबुरामले सत्तारूढ नेकपा अहिले दिपक मनाङे जस्ता ‘बौद्धिक’ कमाउनिष्टलाई पार्टीमा
रमेश दवाडी/काठमाडौँ– सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दल मिलेर बनेका समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय दुईधारमा छन् । पूर्व संघीय समाजवादी र पूर्व नयाँ शक्ति पार्टी मिलेर बनेको समाजवादीमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षको आचरण देखिन्छ । सरकारको स्वस्थ आलोचना गर्न डा.बाबुराम भट्टराई चुक्दैनन् भने उपेन्द्र यादव आलोचना गर्नबाट
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य एवम् सांसद देवेन्द्र पौडेलले बजेट कार्यान्वयनसँगै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता पौडेलले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे छलफल भैरहेकोले
ओली सरकारले १६ महिनामा केही नयाँ काम गर्न सकेनः प्रदीप पौडेल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले वर्तमान सरकारले दुई तिहाईको आडमा एकाधिकार र अधिनायकवाद लाद्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । १६ महिना अवधिमा सरकारले कुनै पनि नयाँ काम गर्न नसकेकाले कांग्रेस सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा
संसदमा प्रतिपक्षलाई ‘वाइपास’ गर्न मिल्छ ? देउवा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरवहादुर देउवाले सरकारले प्रतिपक्षीलाई ‘वाइपास’ गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार संसदमा सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले सत्तापक्षले दम्भमा विधेयक ल्याउने गरेको भन्दै त्यसको कडा विरोध गर्ने बताए । संसदमा प्रधानमन्त्री बोल्दा विपक्षी दलको नेता र विपक्षी दलको
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पार्टीको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बोल्नका लागि समय माग गर्नुभएकामा सभामुख कृष्णबहादुर महराले बोल्न समय उपलब्ध नगराएको आरोप लगाउँदै आपत्ति प्रकट गरेको छ । काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा
गुठी विधेयक फिर्ता नलिए कांग्रेस अन्दोलन गर्ने कांग्रेसको चेतावनी
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गुठी विधेयक फिर्ता नभए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले गुठी विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे । प्रधानमन्त्रीले विधेयक ‘सोच्चिने छ, विचार गरिने छ भन्ने’ र सरकारकै प्रवक्ताले
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले ‘हिमाल, पहाड, तराई–मधेश नेपाली काँग्रेस राष्ट्रिय जागरण अभियान’ अन्तर्गत प्रथम चरणको कार्यक्रममा मुलुकभर दुई हजारभन्दा बढी कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । एक महीनाको अवधिमा जिल्ला, क्षेत्र र गाउँ–नगरस्तरीय कार्यक्रमसँगै अन्य विषयगत भेला र कार्यक्रम तथा वडास्तरमा बैठक,
लन्डनमा सरकार परिवर्तनबारे प्रधानमन्त्री ओलीले के भने ?
काठमाडौं । युरोपको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व परिवर्तनबारे आफ्नो दलले निर्णय गर्ने बताएका छन् । सोमवार बेलुका ब्रिटेनको अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालयस्थित विद्यार्थी युनियनले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो दलभित्रको राजनीतिबारे टिप्पणी गरेका थिए। के
बीपीवाद खोजी : कांग्रेसकाे दोस्रो चरणको यात्रा
काठमाडौँ – बीपी सङ्ग्रहालय समितिले बीपीवादको खोजी गर्दै जेठ ३० देखि ३२ सम्म सुन्दरीजलबाट विराटनगरस्थित कोइराला निवाससम्म यात्रा गर्ने भएको छ। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई बलियो बनाउन बीपीवादको खोजी गर्न दोस्रो चरणको यात्रा गर्न लागिएको समितिका संस्थापक अध्यक्ष परशुराम पोखरेलले बताए । उनले यात्राका
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक दिउँसो ३ बजे बस्दै छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यही जेठ २४ गतेदेखि युरोप भ्रमणमा जाने भएपछि बैठक बस्न लागेको हो । पार्टी कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले दिउँसो ३ बजेतिर बैठक बस्ने बताएका छन् । पछिल्लो समय दुई अध्यक्षबीच
प्यूठान । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य वामेदव गौतमले सहमति बमोजिम अध्यक्षद्वयले आलोपालो सरकार चलाउनु पर्ने बताएका छन्। शुक्रबार प्रेस सगंठन प्यूठानले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा गौतमले दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति पालनामा जोड दिएका हुन् । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारले जनताको चाहना प्रतिकूल हुनेगरी बजेट ल्याएको निचोड निकालेको छ । बिहीबार कांग्रेस संसदीय दलको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि संसदमा प्रस्तुत बजेटले जनताको जीवनस्तर उकास्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको पार्टीका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले छायाँ सरकार गठन गरेको छ । सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको विधानको धारा ९ को उपधारा ५ (क) अनुसार छाँया सरकार गठन गरेका हुन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडका अनुसार हरेक मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिएको र दुई जना सदस्य तोकिएको
काठमाडौँ । तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको सडक दुर्घटनामा निधन भएको २६ वर्ष पूरा भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले मदननगरमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेर शुक्रबार स्मृति दिवस मनाउँदैछ । विसं २०५० जेठ ३ गते चितवन नजीकै दासढुङ्गामा भएको
काठमाडौं । प्मुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले मिडिया काउन्सिल ऐन र मानवअधिकार आयोगसँग सम्बन्धी ऐन फिर्ता गर्न माग गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारले प्रेस र मानवअधिका नियन्त्रण गर्ने मनसायले ऐन ल्याउन खोजेको भन्दै सो फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । सभापति
प्रेस नियन्त्रण गर्ने कानुन कांग्रेसलाई मान्य छैनःसभपति देउवा
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदमा पेश भएको मिडियासम्बन्धी विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको बताएका छन् । सभापति देउवाले विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी रहेकाले कांग्रेस त्यसविरुद्ध लडने बताएका छन् । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटको कार्यक्रम ‘वाइकट’
नुवाकोट । नेपाल प्रेस युनियन नुवाकोटले संचारमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाको कार्यक्रम बहिष्कार गरेको छ । आईतबार बिहान सदरमुकाम बिदुरस्थित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम प्रेस युनियन सम्वद्ध पत्रकारहरुले बहिष्कार गरेका छन् । प्रेस
भियतनाम/रासस मित्र राष्ट्र समाजवादी गणतन्त्र भियतनामको पाँचदिने औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज भियतनामको राजधानी हनोइ आइपुग्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई नोइ बाइ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा भियतनामका उपविदेशमन्त्री न्युन क्युक डङ र थाइल्याण्डका लागि नेपाली राजदूत
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले (आज) बिहीबारबाट देशव्यापी जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने गर्दै छ । काँग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार ७७ ओटैजिल्लामा दिउँसो १ बजे एकैपटक राष्ट्रिय जागरण अभियानको उद्घाटन गरिने कार्यक्रम छ । त्यसका लागि सबै केन्द्रीय नेताहरू जिल्ला तथा
प्रतिपक्षी कांग्रेसको विरोधका बीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका बीच संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाबाट सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । मंगलबारको संसदको वैठकमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिीलाई लिएर विरोधमा उत्रिएका कांग्रेसका सांसदहरु उठिरहे पनि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकार नीति तथा
काठमाडौं । डा. बाबुराम भट्टराई संयोजक रहेको नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम (नेपाल) बीच पार्टी एकीकरण भएको छ । नयाँ पार्टीको नाम समाजवादी पार्टी, नेपाल स्थापना गरिएको छ । सोमबार प्रज्ञा भवनमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच दुई पार्टीको एकता घोषणा गरिएको छ ।
नेपाली नागरिकलाई ‘रानी’ बोक्ने कुनै रहर छैन’:कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा सार्वजनिक गरेको सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको भाषाप्रति नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कडा आलोचना गरेका छन् । उनले ट्ववीट गर्दै राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति नै रहन दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रपतिको दशैंको टीका प्रकरण र शुक्रबारको
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय कोषाध्यक्ष रामकृष्ण ताम्राकारको निधन भएको छ । दुई बर्षदेखि क्यान्सर रोगसँग लडिरहेका ताम्राकारको ललितपुरको जावलाखेलस्थित अल्का अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो । अघिल्लो स्वास्थ्य स्थिती गम्भीर भएपछि उनलाई आईसीयूमा भर्ना गरिएको थियो । करिब
नेकपाका ७७ ओटै जिल्ला अध्यक्ष र सचिव चयन (सूचीसहित)
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले ७७ ओटै जिल्लाको अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाएको छ । लामो गृहकार्यपछि नेकपाले जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाएको हो । पार्टी एकीकरण घोषणा गरेको १ वर्ष बिते पनि जिल्लाको नेतृत्वको बिषयमा सहमति हुन नसक्दा नेकपाको एकताको टुंगो लाग्न सकेको थिएन । आइतबार साँझ